Pandinenge hwokugadza HD girl akadai KLAX, inoratidza anotyisa
mubvunzo Pandinenge hwokugadza HD girl akadai KLAX, inoratidza anotyisa
1 gore 9 ago #595 by svanarsdel
Pandinenge hwokugadza photoreal girl inoratidza kuipa kuti default. Zvii zvandiri kuita zvakaipa.
1 gore 9 ago #605 by archangelmj12
Panogona kuva nezvikonzero zvishomanana zvezviitiko izvi. Chokutanga ndiyo hutano hwemaikirwo, uye rudzi. Chechipiri, iwewe kombiyuta inokwanisa kukwanisa kugadzirisa maikirwo emagetsi pamwe chete nemamwe mabasa ekudzikisa. Sezvaunofanirwa kuziva kuti MSFS ndiyo inonyanya kushandisa sim yakambovakwa nokuda kwekutiza, uye kunyange zvazvo purogiramu yepakutanga yaiva dunk, chokwadi chokuti Bill Gates akazarura kodzero yepurogiramu mu2007 kune ani zvake akasarudza kuita. Kunyangwe pasina STEAM ne mazana ezviuru zvekutsvaga iwe unokwanisa kukwanisa iwere pachake nzvimbo yakakwana. Kutaura chokwadi, pane vakasika vakawanda vari pasi pezera re 20 muchirongwa ichi uye chokwadi ndechekuti vari nani zviri nani uye nemaonero akanaka ekuti ndege ndeipi iyo, kupfuura ACE boka guru rinobatanidzwa nekurongwa kweMSFS. Zvino kana iwe uchida chimwe chinhu chichakuponesa makore ekuedza kunzwisisa chirongwa ichi uye kuti chiite zvakanaka, pane zvinhu zviviri zvaunoda. Yokutanga fs tweak kune fps. Ichi chinhu chakasiyana chaizvo uye chinoshamisa, chiri nyore kushandisa uye chichakudzidzisa izvo iwe usingazivi uye kuti unzwisise sei. Yechipiri ndeye FSPS XTREME. Izvi zvinogogodza masokisi ako. Im iko kushandisa 500 gig 7 yekare yekare laptop neToshiba.intel core i5.i ine ndege ye 3850, 459 mhando dzekuwedzera uye nepamusoro pezvikwata zve ndege zve45000 zvinoshandisa zvinyorwa zvechokwadi, uye izvo zvisingatombovi nemagetsi. Iyo inotorwa pedyo nemakore gumi gore ino kuti iendese kure uye iyo inopfuura makombiyuta e5 uye pamusoro pekudzorera kwe15 uye kusunungura kuputika kwemasvikiro emnyama, uye ini chaizvoizvo ndine scripting yepurogiramu yacho kubva pa microsoft. Ndakadzidza muC2007 kubva kuma microsoft kuti paizova nezvikanganiso zvakanyanya uye zvishoma, asi nhasi nharaunda dzichararama isu takatora purogiramu yakakwirira kusvika tisina kurota. Ndinovimba izvi zvakabatsira, chero mibvunzo, siya mharidzo pano uye kurwara kudzokera kwauri. Izvo zvinhu zvakawanda zvemaitiro ekutengeserana, uye munguva inotevera uchadzidza. Kunze kwezvo, iwe pane nzvimbo yakanakisisa iri pano, kuitira kuti iwe uite zvakanaka. Zvinetso ne ai? Chero chii, regai ndizive. Im yekutanga MSFS answerman. Kana ini ndisingakwanisi kuitora ini ndichaiwana.
1 gore 8 ago #613 by rikoooo
Ndinokutendai mutungamiri mukuru we12 nokuda kwemupinduri wako mukuru.
Svanarsdel, tinenge tichida kubatsira kana iwe ungatitumira mamwe mawindo, saka tinokwanisa kukuudza kuti chii chakashata.
Time chokusika peji: 0.198 mumasekonzi